1 Samueri 9 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rekutanga raSamueri 9:1-27
Samueri anoonana naSauro (1-27)
9 Kwaiva nemumwe murume wedzinza raBhenjamini, ainzi Kishi,+ mwanakomana waAbhieri, mwanakomana waZerori, mwanakomana waBhekorati, mwanakomana waAfiya, wekwaBhenjamini,+ uye aiva murume akapfuma chaizvo. 2 Aiva nemwanakomana ainzi Sauro,+ uyo akanga ari wechidiki uye akanaka, pavaIsraeri pakanga pasina murume akanaka kumupfuura, uye akanga akareba* kupfuura vanhu vese. 3 Pakarasika madhongi* aKishi, baba vaSauro, Kishi akati kuna Sauro mwanakomana wake: “Tora mumwe wevashandi muende kunotsvaga madhongi.” 4 Vakapfuura nemunyika ine makomo yaEfremu uye nemunyika yeSharisha, asi havana kuawana. Vakapfuura nemunyika yeShaarimu, asi vakaashaya. Vakatenderera munyika yese yevaBhenjamini, asi havana kuawana. 5 Vakasvika munyika yeZufi, uye Sauro akati kumushandi wake waaiva naye: “Ngatidzokere, kuitira kuti baba vangu varege kutanga kunetseka nezvedu panzvimbo pekunetseka nezvemadhongi.”+ 6 Asi mushandi wake akati kwaari: “Muguta rino mune munhu waMwari, uye murume wacho anoremekedzwa. Zvese zvaanotaura zvinotoitika chete.+ Handei ikoko iye zvino. Zvichida angatiudza kwatingananga.” 7 Sauro akabva ati kumushandi wake: “Kana tikaenda, murume wacho tichanomupei? Hatina chingwa mumabhegi edu; hatina chipo chekunopa munhu waMwari wechokwadi. Chii chatiinacho?” 8 Mushandi wacho akapindurazve Sauro achiti: “Onai, ndine kamari kesirivha* muruoko rwangu. Ndichakapa munhu waMwari wechokwadi, uye achatiudza kwatingananga.” 9 (Kare muIsraeri, izvi ndizvo zvaitaurwa nemunhu paaienda kunobvunza Mwari: “Handei kumuoni.”+ Nekuti anonzi muprofita mazuva ano, kare ainzi muoni.) 10 Sauro akabva ati kumushandi wake: “Zvawataura zvakanaka. Handei.” Saka vakaenda kuguta kwaiva nemunhu waMwari wechokwadi. 11 Pavakanga vachikwidza makata vachienda kuguta, vakasangana nevasikana vaienda kunochera mvura. Saka vakati kwavari: “Muoni+ ari munzvimbo ino here?” 12 Vakapindura kuti: “Arimo. Anotova pamberi penyu. Kurumidzai, auya muguta nhasi, nekuti nhasi vanhu vari kupa chibayiro+ panzvimbo yakakwirira.+ 13 Pamunongopinda muguta, muchamuwana asati akwidza kunzvimbo yakakwirira kunodya. Vanhu havasi kuzodya kusvikira auya, nekuti ndiye anokomborera chibayiro chacho. Kana izvozvo zvangoitwa, vaya vakakokwa vanogona havo kudya. Saka chibvai matokwidza iye zvino, muchamuwana.” 14 Saka vakakwidza vachienda kuguta. Pavakanga vava kusvika pakati peguta, vakabva vaona Samueri achibuda kuzovachingura kuti vaende kunzvimbo yakakwirira. 15 Nezuro wacho Sauro asati auya, Jehovha akanga audza Samueri* kuti: 16 “Mangwana panenge panguva ino, ndichakutumira murume anobva kunyika yaBhenjamini.+ Unofanira kumuzodza kuti ave mutungamiriri wevanhu vangu vaIsraeri,+ uye achaponesa vanhu vangu paruoko rwevaFiristiya. Nekuti ndaona kutambudzika kwevanhu vangu, uye ndanzwa kuchema kwavo.”+ 17 Samueri paakaona Sauro, Jehovha akati kwaari: “Ndiye murume wandakataura nezvake kwauri ndichiti, ‘Uyu ndiye achatungamirira vanhu vangu.’”*+ 18 Sauro akabva aenda paiva naSamueri pakati pegedhi akati: “Ndinokumbira kuti mundiudzewo kuti imba yemuoni iri kupi?” 19 Samueri akapindura Sauro achiti: “Ndini muoni wacho. Tungamirai kunzvimbo yakakwirira, uye muchadya neni nhasi.+ Ndichaita kuti uende mangwanani, uye ndichakuudza zvese zvauri kuda kuziva.* 20 Kana ari madhongi akarasika mazuva matatu akapfuura,+ usanetseka nezvawo, nekuti awanikwa. Uyewo zvinhu zvese zvakanaka zviri pakati paIsraeri ndezvaani? Hazvisi zvako neimba yese yababa vako here?”+ 21 Sauro akabva apindura kuti: “Handisi muBhenjamini wedzinza diki pamadzinza aIsraeri+ here, uye mhuri yangu haisi iyo isingatombokoshi pamhuri dzese dzedzinza raBhenjamini here? Saka nei mataura mashoko iwayo kwandiri?” 22 Samueri akabva atora Sauro nemushandi wake, akaenda navo kuimba yekudyira, akavapa nzvimbo dzakanaka pane vese vakakokwa; paiva nevarume vanenge 30. 23 Samueri akati kumubiki: “Uya nenyama yandakupa, ndikakuudza kuti, ‘Ichengete.’” 24 Mubiki akabva atora gumbo nenyama yaro yese, akazviisa pamberi paSauro. Uye Samueri akati: “Zvinhu zvanga zvakachengetwa zvaiswa pamberi pako. Idya, nekuti vazvichengetera kuti vakupe panguva ino. Nekuti ndavaudza kuti, ‘Ndine vaenzi vandakakoka.’” Saka Sauro akadya naSamueri zuva iroro. 25 Vakabva vaburuka panzvimbo yakakwirira,+ vakaenda kuguta, uye Samueri akaramba achitaura naSauro vari pamusoro pemba. 26 Vakafumomuka, uye utonga hwatsvuka, Samueri akashevedza Sauro uyo aiva pamusoro pemba, achiti: “Gadzirira uende.” Sauro akabva agadzirira, uye iye naSamueri vakabuda panze. 27 Pavakanga vachidzika vachienda kunoperera guta racho, Samueri akati kuna Sauro: “Udza mushandi+ kuti aende mberi kwedu,” saka akaenda mberi. “Asi iwe mira kuti ndikuudze shoko raMwari.”
^ Kana kuti “uye kubva pamapfudzi ake zvichikwira akanga akareba.”
^ Kamari aka kaipinda ka4 mushekeri. Shekeri rimwe chete rakaenzana nemagiramu 11,4. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ ChiHeb., “afugura nzeve yaSamueri.”
^ Kana kuti “achadzora vanhu vangu kuti vasatsauke.”
^ ChiHeb., “zvese zviri mumwoyo mako.”